To all readers and writers of M G | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » To all readers and writers of M G
To all readers and writers of M G
Posted by စဆရ ႀကီး on May 25, 2011 in Contributor, Columnist, Myanmar Gazette | 27 comments
Mandalay Gazette မှ စာဖတ်သူ၊ စာရေးသူများ အားလုံးပဲခင်ဗျာ..
ရန်ကုန်မှာလဲရှိနေမယ်၊ အချိန်လဲ အနည်းငယ်ပေးနိုင်ကြမယ်ဆိုရင် အားလုံးနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲလေးကို ယခုလာမယ့် ဇွန်လအတွင်းမှာ ပြုလုပ်ချင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း သတ်မှတ်တဲ့အချိန်၊ နေရာတွေမှာ တွေ့ဆုံဖို့ ခက်ခဲမယ်ဆိုတာသိလို့ အားလုံးပဲဝိုင်းဝန်းပြီး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြစေချင်ပါတယ်.. သူကြီးလဲ လေယာဉ်လက်မှတ်အကုန်ခံပြီးလာနိုင်မယ်ဆို ကျွန်တော်ကလဲ သူကြီးရဲ့ လိုင်းကားခလောက်တော့ အကုန်ခံနိုင်ကြောင်း၊ မန္တလေးသူ/သားတွေကိုလဲ အင်းလျားကန်ဘောင်တစ်လျှောက် စုံလင်နှံ့စပ်အောင် လိုက်ပြမယ့်အကြောင်း မြှုူဆွယ်အပ်ပါသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့အမြင် ကိုယ့်အမြင်လေးတွေကို ဓါးတစ်ပြက်၊ တုတ်(ဒုတ်)တစ်ပြက် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း အသေအကြေ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလိုရင်းဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ တွေ့ဆုံပွဲလေး ဖြစ်မြောက်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်လျက်…
တွေ့ဆုံပွဲပြီးရင် ဘယ်ဘုံရောက်မယ်မှန်းမသိလို့ ကြိုတင်ပြီး ခေတ္တလူ့ပြည်လို့ ရေးထားတာလား ရှုံး……လူရေ။
မြန်မာပြည်က ပြန်ရင် နောက်တစ်နိုင်ငံသွားဦးမှာမို့ပါ.. နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ခရီးသွားတွေပဲမလား.. မွေးဖွားစဉ်က သေဆုံးချိန်တိုင်အောင် အချိန်နာရီတွေကို စီးနင်းရင်းနဲ့ သေဆုံးခြင်းတိုင်အောင် ခရီးသွားနေရတဲ့ ခရီးသွားတွေပဲမလား.. ဒါကြောင့် ခေတ္တလူ့ပြည်လို့ ရေးရခြင်းပါ မမရေ..
တွေ့ဆုံပွဲလေးအတွက် အချိန်၊ နေရာတွေ အကြံပြုကြပါဦးလို့..
တွေ့ဆုံပွဲရဲ့ အချိန်၊နေ့၊နာရီ ကိုစောင့်ဖတ်နေမယ်နော်။ ကြုံကြိုက်တဲ့အခါ လာဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ့မယ်။မေတို့ကနယ်မှာနေတာဆိုတော့ တကူးတကကြီးအဆင်မပြေဘူး၊တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါ ဆုံချင်ပါတယ်။မန်းဇက်ကို ဖတ်ပြီးတော့ ကိုယ့်ရှေ့က စီနီယာကြီးတွေကို တကယ်ကိုခင်မင်မိပါတယ်။လူအချင်းချင်း မသိကြပေမဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးမှု၊ဖေးမမှု၊ကူညီမှုတွေကို လည်းမြင်တွေ့ရတဲ့ အတွက် စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။မိုးလင်းလို့ စက်ဖွင့်တာနဲ့ ဒီဆိုဒ်ကိုပဲဖွင့်ဖတ်မိပါတယ်။မေ ပိုစ့်မတင်တတ်ပါဘူး၊ကောမန့်ပဲပေးတတ်ပါသေးတယ်။ဒီကြောင့် မတင်တာပါ။နယ်မှာဆိုတော့ နားလည်တဲ့သူ နည်းပါတယ်။ဒါကိုတောင် မေသွားသင်ထားရတာပါ။ မသိတာတွေရှိလို့ မေးရင်လည်း မေ့ကိုပြောပြပေးကြပါနော်။
ဒါပေမဲ့.. တွေ့ဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်.. ဝိုင်းဖွဲ ့စားသောက်နိုင်ကြဖို့.. ငွေတော့ထည့်မယ်..။
ကိုရင်စိုင်း… ရထားတဲ့ ပွိုင့်ကို ကျပ်ငွေနဲ့လဲပေးမယ်..။
ဆိုတော့… ပိုပိုမိုမို… ၁ဝဒေါ်လာ ထည့်မယ်နော..။
paypal အကောင့်ရှိရင်ပေးပါ..။ လှမ်းပို့လိုက်မယ်..။
ရွာသားတွေ.. ရေခဲရေ ဝယ်သောက်ကြပေ့ါ..။
သဂျီး အထင်သေးလှချည်လား ရေခဲရေ ရောင်းတဲ့ စနစ်မရှိတော့ဘူး ရေသန့်ဘူး သောက်တဲ့ ခေတ် ရောက်နေပြီ။
ဟုတ်ပါ့ဆူးရယ် … သဂျီးက တို့ကို အထင်သေးတယ်… ဒီတော့ ပြန်ပြောလိုက်မယ်… ။
ဗျို့သဂျီး… အိမ်မှာ အပေါဆုံးကရေပဲ လို့ …. ( တိုင်ကီသုံးလုံး နဲ့ လှောင်ထားတယ် )
ရတယ်ဗျို.ရှုံးလူရေ. ကျနော်တို.ကတော. လှည်းတန်းမှာနေတာဆိုတော.ပြောသာပြော
တွေ.ဆုံပွဲ ထက် ပိုကောင်းတာက အလှူပွဲလုပ်တာကောင်းတယ်…
အဲဒါ ကုသိုလ်လဲရတယ် ရွာသူ။ရွာသားတွေလဲ ဆုံရမယ် မကောင်းဘူးလားဗျာ..
ပရဟိတ ဂေဟာတို. ဘာတို.မှာပေါ့….
အိုကေ ရက် ရယ် နာရီရယ် အတိအကျသာ ပြောလိုက်…. ချိန်းထားတဲ့ ဂိမ်းပွဲတွေ ဖျက်ပြီး လာခဲ့မယ်…
ကျွန်တော်လည်း လာချင်ပါတယ် ၄ ရက်နေ့ လောက်ဆိုကောင်းမယ် အဲဒီနောက်ပိုင်းက ခရီးသွားစရာရှိလို့
sunday ချိန်းဗျာ တော်တော်များများအားမယ်ထင်တယ်
အခုအချိန်ထိ နေရာ၊ အချိန်လဲ မသိရသေးပါလား။
အနှိပ်ခန်းမှာ ဆုံရအောင်လား….လူဆယ်ယောက်ရရင် ၂၀% discount ပေးတဲ့ အနှိပ်ခန်းသန့်သန့်လေး သိထားတယ်။
ကိုကြောင်ကြီး …….. ဇာတိကပြပြီ
ဟိုမှာနေတာကြာတော့ ဒီက မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေကို သတိရရှာမှာပေါ့လေ ..
ကိုင်း လုပ်ကြပါဗျာ.. သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရက်လေးတစ်ရက်လောက်
ကိုရှုံးလူက date ဗျာ ကျနော်တို.က တိုင်ပင်မယ်
ရေးဖော်ရေးဖက် သူငယ်ချင်းတွေကို မြင်ဘူးချင်ပါတယ်။ အချိန်နဲ ့နေရာတော့ အခုချိန်ထိ မပြောသေးဘူးနော်။ တနင်္ဂနွေ နေ ့ကတော့ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။
ရေးသမျှ ဝင်ဖတ်နေတဲ့ ဟိုလူတွေက ဒီဖိတ်စာကို ကြည့်ပြီး စောင့်ဖမ်းနေမှာ စိုးမိပါတယ် ..
ဟုတ်တယ် Dr ရေ … ကျမလည်း ဒါကိုပဲ စိတ်ပူပါတယ်… ။ ဆိုက်က လူသိများပါတယ် ….။ စောင့်ဖတ်တာတွေလည်းရှိမှာပါ …. ။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ တွေ့ဆုံပွဲလေး ကနေ ..အသွင်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုလျှင်တော့ မဆုံကြတာ ကောင်းပါလိမ့်မယ်… ။ အားလုံးကိုတွေ့ တွေ့ချင်ပါတယ် …….
shopping center တခုခုရဲ့ စောင့်ရန် နေရာတခုမှာ ချိန်းကြပါလား..
ဥပမာ ဂျန်းရှင်းမော်တင်လိုမျိုး.. အောက်ထပ်မှာ ထိုင်စောင့်စရာ ခုံရှိတယ်။ နီးစပ်ရာ နေရာတခုခု လုပ်ကြပေါ့။ မိုးတွင်းကြီး.. မိုးလုံ လေလုံ ဖြစ်ဖို့ လိုတယ်။ လူစုံအောင် စောင့်ရင်းနဲ့ ကြွက်စုပ် ဖြစ်သွားကြအုန်းမယ်။
တကယ်သာလွတ်လပ်သွားပြီလို့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့တနေ့မှာတွေ့ချင်ပါတယ်။ ရေးချင်တာတွေရှောက်ရေးထားတော့ အစဉ်အဆက်ကရှိခဲ့တဲ့အမြင်ကပ်ပုဒ်မ ရှိမရှိ မသေချာလို့မတွေ့ရဲသေးပါ။
အဲဒီလိုပွဲမျိုးလေး လုပ်ရင်တော့ လာချင်သားဗျ။
တစ်ယောက်နဲ ့တစ်ယောက်လည်း မြင်ဖူးသွားတာပေါ့။